musha » musha » Nonce
Tag: Blockchain, Bitcoin kuchera, nuncio, Uchapupu hwebasa
Un nuncio zvinoreva nhamba kana kukosha kunogona kushandiswa kamwe chete.
Nonces inowanzo shandiswa muzviratidzo zvechokwadi uye mu cryptographic hash mabasa. Muchirevo chetekinoroji blockchain, nonce inoreva nhamba yekunyepedzera-inoshandiswa seyakaunda panguva yekutora.
Semuenzaniso, Bitcoin miners vanofanirwa kuyedza kufungidzira isingabvumirwe nonce vachiita kuyedza kwakawanda kuverenga block hash inosangana nezvimwe zvinodiwa (kureva, kutanga neimwe nhamba yezero). Kana uchikwikwidza kukomba yangu nyowani, mucheri wekutanga anowana nonce inoguma neyakavimbika block hash ane mvumo yekuwedzera chinotevera block mu blockchain - uye anopihwa mubairo wekudaro.
Mune mamwe mazwi, maitiro emigodhi inoumbwa nevashandi vemumigodhi vanoita zviuru zvemazana zvehashi nemhando dzakasiyana dzakasiyana nonce kusvikira zvaburitswa zviripo Kana kuburitsa kwemugodhi kuchiwira pasi pechikumbaridzo chakatemerwa, block yacho inoonekwa seyakafanira uye inowedzerwa kune blockchain. Kana zvakabuditswa zvisiri izvo, mugodhi anoramba achiedza nemhando dzakasiyana dzeasisi. Kana bhurocha idzva rakabuditswa uye rikasimbiswa, maitiro anotanga pamusoro.
MuBitcoin - uye mune zvakawanda Zviratidzo zveMabasa masisitimu - iyo nonce ingori nhamba isina kujairika iyo vanochera vanoshandisa kudzikamisa kuburitswa kwehuwandu hwavo hwehash. Vashandi vanoshandisa nzira nekuyedza nekukanganisa, uko kuverenga kwega kwega kunotora kukosha kusiri kweiyo. Vanoita izvi nekuti mukana wekufungidzira nemazvo nonce inoshanda iri padyo ne zero.
Ivhareji nhamba yekuyedza kuyedza ino gadziridzwa otomatiki neiyo protocol kuona kuti yega nyowani blockchain inogadzirwa - paavhareji - yega gumi maminetsi. Maitiro aya anozivikanwa se kuoma kugadzirisa uye ndizvo zvinosarudzira kubviswa kwechikumbaridzo (kureva., mangani mazero iro block hash rinofanirwa kutorwa serechokwadi). Iko kunetsa kwekutora bhuroka nyowani kune hukama nehuwandu hwesimba simba (chiyero chehash kana hash rate) kuita blockchain system. Iyo inowedzera hashing simba yakatsaurirwa kunetiweki, iyo inowedzera chikumbaridzo chichava, zvinoreva kuti simba rakawanda remakomputa richadikanwa kuve anokwikwidza uye anobudirira mugodhi. Zvakare, kana vacheri vakafunga kumisa kuchera, kuoma kunogadziriswa uye chikumbaridzo chinodonha, saka mashoma mashandisirwo emagetsi anozodiwa kumigodhi, asi iyo protocol ichaita kuti block block itege mamineti gumi, zvisinei.
Nyaya yapfuuraChii chiri chisina kuvimbika netiweki, pasina kukosha kwekuvimba
Nyaya inoteveraNFT: ZVINOGONESA Nhungamiro yeKutsvaga Inotevera 100x!